Myat Shu - တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
You are here : Myat Shu » Archives for တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
Published By Myat Shu On Friday, December 23rd 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, အက်ဆေး
နေသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအားလျော်စွာပဲ အဲဒီနေသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ… ……………………………. အဆောက်အအုံထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ လေအေးပေးစက်က ထွက်လာတဲ့ အငွေ့တွေက ဆီးကြိုလိုက်ကြတယ်။ အပြင်မှာတော့ ပူလှချေရဲ့လို့ ပြောရလောက်အောင် အကင်းမသေသေးတဲ့အဖြစ်တွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်ထက် နည်းနည်းပိုသိတဲ့ (အခမ်းအနားအကြောင်း) ကဗျာဆရာရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့ပဲ ခန်းမကြီးတစ်ခုထဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ စောစောက ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ပြင်ပရာသီဥတုနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလို အဆင်ပြေပြေ ခံစားရတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းလေး ပေါ့ပါးနေတယ်။ ကော်ရစ်ဒါအတိုင်း လျှောက်လာခဲ့ပြီး တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့လိုက်တယ်။ ကိုယ့်အရင်ရောက်နေနှင့်သူတွေရဲ့ ညံ့ညံ့သက်သက် လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရပြန်တယ်။ အရိပ်တွေ လေပြည်သွေးနေသလို ခပ်အက်အက် တိုးညင်းသံကိုလည်း ကြားနေရပြန်တယ်။ “ခဏလေးပါနော်” ဆိုတဲ့ ခွန်းဆင့်သံကလည်း ကျေနပ်မှုကို ပေးပြန်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာကတော့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, December 12th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
(၁) တစ်နေ့က သမိုင်းရပ်ကွက်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းသို့ ရောက်သည်။ မတွေ့ရတာ ကြာသော လူငယ်လေး တစ်ဦးနှင့် တွေ့မလားဟုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ သူနှင့် အတူနေသူများကိုပဲ တွေ့သည်။ ထိုလူငယ်လေးကို ကျွန်တော် သွားတွေ့ရန် တာဝန်ရှိနေသည်ဟု ကျွန်တော် ယူဆသဖြင့် သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ခဲရသည်မှာ မိုးလယ်တွင် ဖြစ်၏။ ထိုမတိုင်ခင် ခြောက်လလုံးလုံးကတော့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခု အတူတွဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွေ့သောနေ့က သူ့ကို ကျွန်တော် စကားမာမာ ပြောမိခဲ့သည်။ သူက ဦးအောင်သင်း စာအုပ်ဆိုလျှင် မဖတ်ကြောင်း၊ တစ်အုပ် စမ်းဖတ်ကြည့်ရာ ပထမ စာကြောင်းများမှာပင် လူငယ်တွေအပေါ် မင်း၊ ငါ လေသံတွေသုံးပြီး ရေးထားပုံ၊ ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ဆုံးမနေပုံများကို တွေ့ပြီး ဆက် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, December 4th 2011. Under ကဗျာ, တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု
မြင်ကွင်း (မျက်ရှုအတွက် ရေးဖွဲ့ပေးသည့် ကဗျာ) လက်ပံတပင် ရှင်သန်ကြီးထွား ငါ့ပြတင်းမှ မြင်ကွင်းအား ဆီးတားပိတ်ဆို့မှောင်။ လာဟေ့ ပေါက်တူး လာဟေ့ ငမန်း လာဟေ့ ဓားမ လှဲလိုက်ကြစို့ တိမ်တွေလှတာ ကြည့်ရအောင်။ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပျို့သစ် လေတ၀ုန်းဝုန်း လှိုင်းလုံးအုံကြွ မြစ်မရူးပြီ … စူးနာနာ ထိုး ကြိုးနာနာ ချည် သည်လိုပင်လျက် ကူးတို့ငှက်တို့ မြောက်တက်ခုန်ပေါက် လေပြင်းနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်မည်ပြင် … မင်မည်းအရောင် အနောက်တောင်က တိမ်မှောင်နိမ့်ဆင်း မိုးပြင်းကြီးရွာ ပြေးလို့လာပေါ့ … လျှပ်စစ်အလင်း ၀င်းကနဲ ပြက်၊ လက်ကနဲ စူး ဘီလူးအော်သံ မိုးလုံးညံရော … ဘယ်မလဲ နေ၊ မိုးနဲ့လေချည်း နေ့ ငွေရောင်ဖြူ ပြူနိုး ပြူနိုး မျှော်လင့်ခိုးလည်း မိုးကြောင့် မိုးကြီးချုပ်ခဲ့ပြီ။ နေရောင်အပျောက်၊ ရေတောင်မောက်တယ် လေနှောက်မိုးသည်း၊ ဟည်းတဲ့လှိုင်းများ စည်းသားထားပေါ့။ ဘလ္လာတိယ ပျို့မှစာလို ကိန္နရာဖို ငိုတဲ့ရသ ခံစားရရဲ့ မြစ်မရူးပြီ မောင်ရူးပြီ ခင်။ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ၃၀.၅.၈၁၊ သဘင် တောဘူတာ ဆိုင်းဘုတ်ပဲကား ယိုင်ရွဲ့ ယိုင်ရွဲ့ … ပျံတဲ့ငှက်များ ခိုနားဓာတ်ကြိုး ဖြုတ်ခိုး ပြတ်တောက် … တမာပင်အောက် ချွေးပေါက်တသောင်း … ကွပ်ပျစ်ဟောင်းတွင် ခြေညောင်းလက်ဆန့် ငံ့မျှော်စိတ်လေး … နွားဈေး စပါးဈေး ဈေးနှုန်းအကြောင်း တဘက်ပေါင်း လူများ စကားဝိုင်းဖွဲ့ … အကြော်ကုန်ပြီ နို့ဆီမလောက် ကောက်ညှင်းမကျန် အစီခံ ဒူးယား နဂါးအထိ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, December 4th 2011. Under ၀တ္ထု, တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု
ယခုရေးသားသော အကြောင်းအရာတို့သည် တစ်ဆင့်စကားမှ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချရခြင်းဖြစ်၍ မှန်ကန်ပါသည်ဟု အာမ မခံလို။ ယင်းသမို့ကြောင့် မယုံလျှင် ပုံပြင်မှတ်ယူ၍ ယူဆနိုင်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကိုယ့်စနက် တစ်စက်ကလေးမျှ မပါဘဲ အရှိကို အရှိအတိုင်း၊ အကြားကို အကြားအတိုင်း ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ မယုံလျှင် ပုံပြင်မှတ်ဟု ဆိုနိုင်သော ယုန်တိုင်းပြည်အကြောင်းကား ဤသို့တည်း။ ~၀~ ~၀~ ~၀~ ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါ ဤမြေဤကမ္ဘာ၌ ယုန်တိုင်းပြည်ဟူ၍ ရှိသတတ်။ ယုန်တို့နေရာ ထိုတိုင်းပြည်ကား မြေဆီသြဇာ ကောင်းမွန်၍ စပါးဆန်ရေ ပေါများကြွယ်ဝ၏။ ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ သစ်ရာ၊ အင်ကြင်း စသော အဖိုးတန်သစ်ပင်များ ထူထပ်သိပ်သည်းစွာ ပေါက်ရောက်၍ သစ်တောအုပ်ကြီးများအဖြစ် တည်ရှိနေကြ၏။ ပင်လယ်နှင့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များတွင်လည်း ... Continue Reading
ခဲစာလုံးဖြင့် စာစီခြင်း (၃)
Published By Myat Shu On Thursday, December 1st 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
၄။ စာစီခြင်း (Hand Compositing) နှင့် စာပစ်ခြင်း။ ခဲစာလုံး စာစီခြင်း ။ ။ အောက်ပါပုံတွင် မြင်ရသည့်အတိုင်း စာစီဆရာသည် ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် စာစီစတစ်ကို ကိုင်ထားပြီး လိုအပ်သည့် စာလုံးများကို ညာလက်ဖြင့် စာခွက်များထဲမှ နှိုက်ယူကာ စာကြောင်းအလိုက် စီရသည်။ စတစ်၏ ညာဘက်မှ တစ်လုံးချင်း စစီရသည်။ သို့မှသာ ဘယ်ဘက်မှစသည့် ပုံနှိပ်စာဖြစ်မည်။ စာစီသမားသည် စာခွက်များကို အလွတ်ရနေရမည်။ စာစီလုပ်သက်ရင့်လာလျှင် ၀ါကျတစ်ကြောင်း ဖတ်ပြီးသည်နှင့် ညာဘက်လက်က သက်ဆိုင်ရာ စာခွက်များကို ဆက်တိုက်လှမ်းပြီးသားဖြစ်သည်။ ကွန်ပြူတာဖြင့် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာစာများကို ရိုက်ရာ၌ လက်ချောင်းများက ကီးဘုတ်တွင် အလိုလို ပြေးနေသလိုဖြစ်သည်။ ကိုယ်လိုချင်သည့် စာလုံး ဘယ်နေရာမှာရှိသည် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, December 1st 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
ကျွန်မ လွိုင်ကော်ကနေ အောင်ပန်းကို ပြန်တဲ့နေ့က “ဆောင်းပြောင်း”ဈေးနေ့နဲ့ ဆုံနေတော့ ကားက လူအရမ်း ကျပ်ပါတယ်။ လွိုင်ကော် တောင်ကြီး မနက်စောစော ထွက်တဲ့ကားဆိုတော့လဲ တစ်လမ်းလုံး တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ လူပြတ်တယ်လို့ကို မရှိပါဘူး။ ဒါတောင် ပါလာတဲ့ ဒေသထွက် အသီးအနှံတွေ၊ ပန်းတွေက ကားဗိုက်ထဲမှာ ထည့်ထားလို့ တော်သေးတယ်ပြောရမှာပါ။ မိုးဗြဲရောက်တော့ ကားတံခါးဝမှာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိတဲ့ ကလေးကို ချီထားတဲ့ သားအမိကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးအမေက ဘေးမှာ ပါလာတဲ့ အဖော်နဲ့ စကားတွေ ပြောလာတော့ ကလေးက ဟိုငေးဒီငေး လုပ်လိုက်၊ အိပ်ငိုက်လိုက်ပေါ့။ ကားပေါ်ကို ခရီးသည်တွေက တက်လိုက်ဆင်းလိုက် လုပ်နေတော့ တိုးရင်းခွေ့ရင်း ကလေး သားအမိက ကျွန်မထိုင်တဲ့ ခုံနားကို ... Continue Reading